1.25 milyan Kenyaan ah oo laga tallaali doona Covid-19 ka hor bisha Lixaad ee sanadkan | Star FM
Home Wararka Kenya 1.25 milyan Kenyaan ah oo laga tallaali doona Covid-19 ka hor bisha...
1.25 milyan Kenyaan ah oo laga tallaali doona Covid-19 ka hor bisha Lixaad ee sanadkan
In ka badan 1.2 milyan oo Kenyan ah ayaa lagu wadaa in laga tallaalo cudurka Covid-19 ka hor bisha Lixaad ee sanadkan, sida ay sheegtay wasaaradda caafimaadka ee dalka.
Dowladda ayaa sheegtay in Kenya ay soo iibsan doonto 24 milyan oo xirmada tallaalka Covid-19 oo ay ka helayaan barnaamijka tallaalka adduunka oo lagu magacaabo COVAX iyo sidoo kale 11 milyan xirmo oo tallalkan ay ka heli doona shirkado kale ee soo saara daawooyinka.
Xoghayaha wasaaradda caafimaadka u qaabilsan dhanka maamulka Mercy Mwangangi ayaa sheegtay in dowladda ay qorsheynayso in ay cudurka ka tallaasho illaa 16 milyan oo qof muddo 18 bilood ah gudaheed.
Dowladda ayaa sameysay guddi howleed kormeera soo iibinta tallaalka Covid-19.
Kuwa ugu horreeya ee cudurka laga tallaali doona ayaa waxa ka mid ah shaqaalaha daryeelka caafimaadka ee safka hore kaga jira la tacaalidda cudurka Covid-19, wakiilada amniga, macalimiinta iyo kuwa ka shaqeeya guryaha daryeelka caafimaadka.
Previous articleShirkii ay ku baaqeen Puntland iyo Jubbaland oo baaqday iyo sababta
Next articleMadaxweyne Farmaajo iyo beesha caalamka oo maanta kulan yeelanaya